Mhando dzechubhu dzinotakura ropaEdit
VaGiryama vanoti m'siha (artery) kureva tsingahuru.
VaYao vanoti mtasi (nerves, blood vessels, tendons).
VaNyungwe vanoti uzingo (vein) kureva tsinga.
VaSukuma vanoti bubi (bad) kureva huvi.
Vatauri veLuganda vanoti msiwa (blood vessel) kureva tsinga.
VaGanda vanoti msiwa (a vein) kureva tsinga. Fananidza nokuti musiya?
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Chubhu_dzinotakura_ropa&oldid=67644"
Last edited on 30 Chikunguru 2019, at 00:54